Intlanzi ephaphazelayo, ummangaliso wendalo | Ngeentlanzi
Indalo ayisoze iyeke ukusimangalisa ngalo lonke ixesha. Nangona indawo ekuhlala kuyo iintlanzi iphakathi kweelwandle kunye neelwandle, kukho iintlanzi ezinje nge Iintlanzi ezibhabhayo ezinempawu emzimbeni wazo ezenza ukuba zibe nezakhono ezintle ekubalekeni emanzini. Imalunga nentlanzi ebhabha kamnandi.
Kungenzeka njani ukuba intlanzi, indawo yokuhlala yayo iphantsi kwamanzi, ibe nezakhono zokucwangcisa ngaphandle kwayo? Ukuba ufuna ukufumanisa yonke into malunga nentlanzi ephaphazelayo, qhubeka ufunda 🙂
1 Iimpawu zentlanzi yokubhabha
2 Imilo yomzimba wakho kunye nokubhabha
3 Indawo yokuhlala
Iimpawu zentlanzi yokubhabha
Zininzi iintlobo zeentlanzi eziphaphazelayo kwaye zonke zezosapho olukhulu lwe-Esocétidos, yomyalelo weAteriniformes. Olona hlobo luqhelekileyo lwaziwa njengentlanzi ebhabha yaziwa njenge I-Exocoetus volitans.
Ezi ntlanzi zinamaphiko amakhulu emiphunga ethatha ukubonakala okwamaphiko kwaye yiyo loo nto zithiywe ngaye. La "maphiko" ayabanika ukubanakho kwentlanzi ukutyibilika ngokulula emanzini. Umzimba wayo une-morphology eguqukayo kakhulu apho amaphiko ayo e-pelvic ancamathele kuyo kwaye ayenze yintlanzi ebhabha yokwenyani.
Ezi ntlanzi zichitha ixesha elininzi kufutshane nomphezulu wolwandle apho benza khona ukutsiba kunye neenqwelomoya, ngokungathi ziintaka. Iimpiko zazo zinobukhulu obahlukeneyo, ezinye zazo zinkulu kakhulu, nto leyo ebenza babonakale ngathi banezinto ezingaphezulu kwamaphiko amabini.
Olunye uphawu iintlanzi eziphaphayo olunazo ezibenza babaluleke kangaka ngamehlo abo. Zicaba-ceke ngokumila ngokokude zibonise umbono ovelele kakhulu kwaye ziphantse zibe nkulu kunomjikelo wazo. Olu hlobo lwamehlo, njengayo yonke into kwibhayoloji yezinto eziphilayo, lunesizathu sokuba lube njalo. Kwaye kunjalo, enkosi kula mehlo, bayakwazi ukujonga ngaphandle kwamanzi ngokulula xa bebhabha. Ziyazithanda ukuba zibalekele amarhamncwa, kuba ezi ntlanzi zihlaselwa lininzi lazo.
Ngexesha kunye nendaleko, bakwazile ukuphucula obu buchule boku "kubhabha" ukuze bahlale bekhuthele kwaye bazilinde kwizilwanyana ezingenabo obo buchule. Bayakwazi ukugcina ukutyibilika imizuzwana embalwa, nto leyo ibanika ithuba elikhulu lokubaleka amarhamncwa abo.
Zikwathathwa njengezilwanyana ezikrelekrele kakhulu, kuba ziye zakwazi ukongeza obu buchule kwindalo yazo yonke ukuze zonyuse amathuba azo okusinda elwandle.
Imilo yomzimba wakho kunye nokubhabha
Umzimba wale ntlanzi ugcwele izikali ezinkulu ezisebenza ngokugudileyo. Ndiyabulela kwinto yokuba abanobunzima, zinokubhabha ixesha elide emoyeni xa zixhuma. Banomphetho ongasentla womphetho womsila wobukhulu obuphakathi kwaye emaphethelweni omzimba wabo unezinto ezisongwayo eziya macala omabini.
Umzimba umdaka kunye nohlobo olumnyama mnyama ngasemva kunye nebhanti emhlophe ngasemva kweempiko zepectoral. Iphiko le-pelvic kunye ne-pectoral yinto eyisebenzisayo xa ibhabha kwaye umsila wayo yinto yokuqala ukuzihambisa.
Xa ezi ntlanzi zibaleka (kwakhona siyacacisa ukuba ayisiyiyo indiza, kodwa yinto yokubaleka kakhulu) ngumbono. Xa zishenxa, Bayakwazi ukuhamba umgama phakathi kwe-60 kunye ne-100 yeemitha kwisantya seekhilomitha ezingama-55 ngeyure. Le yinto enomtsalane kwindalo kwaye, ke ngoko, ayiyeki ukusothusa. Intlanzi, indawo yokuhlala yayo isemanzini, iyakwazi "ukubhabha" ngaphandle kwayo ngaphezu kwaloo migama.
Ukuze bakwazi ukugubungela lo mgama, kufuneka babethe amaphiko abo ngaphezulu kwamaxesha angamashumi amahlanu ngomzuzwana omnye. Ndiyabulela koku kubhabha banokugcina i-glide yabo kude kube banokugubungela umgama ongaphezulu.
Ukubona i-glide yentlanzi ebhabha yinto entle, kodwa ukubona enye yazo isenza ezi zinto zihambayo ngumbono wendalo. Ezi ntlanzi zifunyanwa ixesha elininzi zisenza oku kuxhuma kwaye zihlala ngaphandle kwamanzi.
Ngexesha lasehlotyeni banokubonwa bejikeleza ecaleni kweelwandle. Bayakwazi ukuthatha indawo yemisinga yomoya ukuqhubeka nokuphucula amandla abo okuhamba ngenqwelomoya kunye nokufikelela imigama ukuya kuthi ga kumakhulu amane eemitha.
Njengoko bekutshiwo ngaphambili, iintlanzi ezibhabhayo zihlala phantsi kwiindawo ezinzulu ubunzulu. Bayemka kunxweme ebusika baze babatyelele kwakhona ehlotyeni. Amanzi akhethiweyo ezi ntlanzi ashushu kwaye ashushu.
Banobuchule bokuzimela kwiindawo apho banokufumana lula ukutya kwabo. Eyona ntlanzi ibhabha ixhaphakileyo isekwe emanzini eAtlantic nakwiMeditera.
Ukondliwa kwezi ntlanzi kukutya iplankton. Amaxesha amaninzi banokutya ezinye iintlanzi ezincinci kunye nobukhulu obuphakathi. Le ntlanzi ayinabungozi kakhulu.
Amaqanda abo asetyenziswa eJapan ukulungiselela i-sushi. Le ntlanzi ayikhathazeki kakhulu malunga nokutya kwayo, kodwa ithatha inkathalo ngakumbi ukugcina iinqwelomoya zayo zisemoyeni.
Ezi ntlanzi zizala ngamaqanda. Zifakwa ngabantu ababhinqileyo kwi-algae okanye ezinye izinto zolwandle ezibanceda bahlale kufutshane nomphezulu wamanzi. Amaqanda zibanjiwe kunye ngeentambo ezincinci, ezincinci kakhulu.
Xa amaqanda eqanduselwe, imibungu emininzi iyaqandusela engafani ncam neempawu zentlanzi ephaphazelayo. Njengokuba bekhula bekhula, bafumana iimpawu zabo ezizodwa.
Ezi ntlanzi azikho kwimeko yokukhusela. Nangona kunjalo, amaqanda abo zixabiseke kakhulu ekwenzeni i-sushi. Ukuthintela isoyikiso kubemi, eminye imithetho kufuneka ifumaneke enceda ukukhusela ezi ntlanzi kwaye zikwazi ukuzigcina. Elona rhamncwa lalo liqhelekileyo iseyilefish. Emva kwale ntlanzi, ityhuna, i-mackerel kunye ne-swordfish nazo zizilwanyana ezinamandla.
Njengoko ubona, indalo ayisoze iyeke ukusimangalisa kwaye isinikeze imiboniso efana nale. Ukuloba iintlanzi kufanelekile ukuba sikubone kwaye kuya kusinika into esingazange sayibona ngaphambili.
Umendo opheleleyo kwinqaku: Ngeentlanzi » Intlanzi » Ukuloba iintlanzi